बैकर्सहरुलाई झपार्दै गभर्नरले भने– ‘राष्ट्र बैंकलाई जिस्क्याउन खोजेको ? ’ - Arthakoartha.com - Arthakoartha.com
बैकर्सहरुलाई झपार्दै गभर्नरले भने– ‘राष्ट्र बैंकलाई जिस्क्याउन खोजेको ? ’
काठमाडौं, २१ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा गरेको प्रतिस्पर्धालाई गलत भन्दै सच्चिन आग्रह गरेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको साधारण सभामा उनले बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा प्रतिस्पर्धा गरेर राष्ट्र बैंकलाई के गर्न खोजेको भनेर प्रश्न पनि गरे ।
‘बैंक भनेको जनताको पैसा प्रयोग गर्ने ठाँउ हो । त्यसकारण जनताको पैसाको प्रयोग गर्दा अलिकति संवेदनशिल बनिदिनुस् । उनले भने–पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा तपाईहरुले गर्न खोज्नु भएको छ । त्यो गलत गरिरहनु भएको छ । सेन्टर बैंकलाई तपाईहरुले के गर्न खोज्या हो ? जिस्क्याएको हो की के हो ?’
उनले मनोमानी गर्नेलाई काराबाहीको चेतावनी पनि दिए । ‘कमसेकम यत्रो पढेलेखेको क्वालिफाइट मान्छेहरुले त बुझ्नुपर्छ । बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र केही संचालक समेत सहभागि उक्त कार्यक्रममा उनले भने– ‘सबैभन्दा बुझेको मान्छे बसेको सेक्टर यही हो । यस्तो संस्थाले पनि गलत उपयोग गर्ने । सेन्टर बैंक पनि छ भन्ने कुराको हेक्का राख्नुस् । ’
यसका साथै उनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र संचालकहरुलाई गम्भिर र नैतिकवान बन्न आग्रह पनि गरे । ‘तपाईहरुले जनताको पैसा चलाउनु भएको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले संवेदनशिल भएर हेरिरहेको छ । ’ गभर्नर नेपालले भने ।
रैराङ जलविद्युतको प्राथमिक शेयर आउँदै, ८ लाख ४० हजार प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिने
‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’लाई लक्षित गरि थपिए ६ तारे होटल
पहिलो त्रैमासमा १ अर्ब ८८ करोड रकम बरावरको आईपीओ निष्काशनको अनुमति, हकप्रद निष्काशनमा भने कमि आएको बोर्डको भनाइ